ग्लु बिन्दुहरू पट्टी
ग्लु बिन्दुहरू रेखाचित्र पट्टिमा प्रतिमा
ग्लु बिन्दु॒ घुसाउनुहोस्
जहाँ तपाईँले वस्तु क्लिक गर्नुभयो त्यहाँ ग्लु बिन्दु घुसाउनुहोस्
निस्कने दिशा बायाँ
चयन गरिएको ग्लु बिन्दुको बायाँ कुनोमा जडानकर्ता संलग्न गर्नुहोस्.
निस्कने दिशा माथि
चयन गरिएको ग्लु बिन्दुको माथिल्लो कुनोमा जडानकर्ता संलग्न गर्नुहोस्.
निस्केन दिशा दायाँ
चयन गरिएको ग्लु बिन्दुको दायाँ कुनोमा जडानकर्ता संलग्न गर्नुहोस्.
निस्केन दिशा तल
चयन गरिएको ग्लु बिन्दुको तल कुनोमा जडानकर्ता संलग्न गर्नुहोस्.
ग्लु प्वाइन्ट सम्बन्धित
तपाईँले वस्तु पूर्वसाइजमा ल्याउनु भएको बेला चयन गरिएको ग्लु बिन्दुको सम्बन्ध अवस्था निर्धारण गर्नुहोस्.
स्थिर तेर्सो बायाँ
वस्तु पूर्वसाइजमा भएको बेला, हालको ग्लुबिन्दु वस्तुको बायाँ कुनामा स्थिर हुन्छ.
तेर्सो केन्द्र निश्चित गर्नुहोस्
वस्तु पूर्वसाइजमा भएको बेला, हालको ग्लु बिन्दु वस्तुको केन्द्रमा स्थिर रहन्छ.
स्थिर तेर्सो दायाँ
वस्तु पूर्वसाइजमा भएको बेला, हालको ग्लु बिन्दु वस्तुको दायाँ कुनामा स्थिर रहन्छ.
स्थिर ठाडो माथि
वस्तु पूर्वसाइजमा भएको बेला,हालको ग्लु बिन्दु वस्तुको माथि कुनामा स्थिर रहन्छ.
ठाडो केन्द्र स्थिर
वस्तु पूर्वसाइजमा भएको बेला, हालको ग्लु बिन्दु वस्तुको ठाडो केन्द्रमा स्थिर रहन्छ.
स्थिर ठाडो तल
वस्तु पूर्वसाइजमा भएको बेला, हालको ग्लु बिन्दु वस्तुको तल कुनामा स्थिर रहन्छ.
Title is: ग्लुबिन्दूहरू पट्टी